Warkii.com-News and information about Somalia Daawo Sawirada:-Gabar Madoow ah oo lagu Cunsuriyeeyay Makhaayad ay ka shaqeeneysay - Warkii.com-News and information about Somalia
Daawo Sawirada:-Gabar Madoow ah oo lagu Cunsuriyeeyay Makhaayad ay ka shaqeeneysay
Gabar Madow ah oo ka shaqeeneysay makhaayad kutaala Virginia dalka Mareykanka ayaa fal cunsuriyad ah waxa ay kala kulantay Lamaane cadaan ah oo ka cunteenayay Makhaayada ay ka shaqeyso.
Kelly Carter oo adeegto ka aheed Makhaayada ayaa loo qoray Warqad lagu cunsuriyeeyay kadib markii Lamaanaha cadaanka ah ay ka qaaday Warqada biilka ah ee ku qorneed lacagta cunada ay cuneen.
Gabadhan la midab takooray oo Warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in lamaane cadaan ah ay u adeegtay ay u qoreen “adeeg wanaagsan ayaad noo samaysay laakiin baqshiish ma siinno dadka madawga ah”
Gabadhan la midab takooray ayaa Warbaahinta dalka Mareykanka u sheegtay in lamaanaha meesha ka casheeyay midkood uu aad u amaanay qureec ay Sabtidii makhaayadda ka cuneen oo ay iyadu u adeegtay.
Macaamiisha kale ee Makhaayada ka cunteeya ayaa falkan gabadha lagula kacay ku tilmaamay mid aan habooneyn , waxa ayna Kelly ugu deeqayeen lacago dheeraad ah oo ka baxsan lacagta biilka raashinka ay cuneen.
Kelly Carter ayaa waxaa sidoo kale kalgaceyl u muujiyay xabadkana galinayay macaamiisha Makhaayada ay ku jiraan kuwa cadaan ah , waxa ayna ka xumaadeen midab takoorka lagu sameeyay ay kala kulmeen lamaane dhalinyaro ahaa.
Lacagta dheeraadka ah ay bixiyaan dadka macaamiisha ah ee ka cunteeya makhaayadaha ayaa wax iska caadi ah, waxaana lacagtaasi qaata dadka u adeega dadka macaamiisha ah ee ka cunteeya Makhaayadaha, waxaana lacagtaasi mushaarkooda ku kabta shaqaalaha.